Macalinka Spain Oo Hal Shardi Ku Xiray Inuu Morata Kusoo Daro Xidigaha Koobka Aduunka Uga Qeyb Galeysa %
Inkastoo, uu hadda dhibatooyiin ay kamid yihiin gooldhalin la’aan ay ku haysato kooxdiisa Chelsea, hadana maamulaha qaranka Spain ee Julen Lopetegui wuxuu sheegayaa in Alvaro Morata uu fursado fiican uhaysto inuu koobka aduunka usoo xusho.
Ciyaaryahankii hore ee Real Madrid ayaa wuxuusan hadda kamid ahayn liiska ciyaartoyda Spain, kuwaasoo udheeleysa kulamada saaxiibtnimo ee nagu soo food leh, kuwaasoo ay la kala dheelayaan Spain, xulalka kala ah: Jarmalka iyo Argentina.
Mar la weydiiyay macalin Julen Lopetegui, fursado uu Morata uhaysto inuu kasoo muuqdo koobka aduunk ayuu ku jawaabay: “Dabcan, Morata wuxuu uhaystaa fursad fiican inaan uwato koobka aduunka, isaga xitaa waa uu ogyahay midaas.
“Kaliya wuxuu baahan yahay inuu si fiican udheelo iyo inuu sare ukac uu sameeyo kulamada uu dheelayo bilooyinka soo socda, wuxuuna sameyn karaan wax walba oo isaga dan u ah,” ayuu hadalkiisa ku daray, hogaamiyaha Spain.
Dhanka kale, Julen Lopetegui ayaa wuxuu ka hadlay muuqaal ciyaareedka kabtanka kooxda kubada cagta Barcelona ee Andres Iniesta, isagoona sheegay in wali uu laacibkaan muhiim uyahay safkiisa, uuna hada ka wanaagsan sidii uu ahaa xagaagii hore.
“Waxaan dhihi karaa inuu Iniesta ka fiican yahay sidii uu ahaa xili ciyaareedkii hore, wuxuuna noqday mid si joogta ah udheelo, wuxuuna sameynayaa wax wanaagsan sida aan aaminsahay,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay macalinka qaranka Spain.
Alvaro MorataChelseaJulen LopeteguiSpain
Didier Drogba Muxuu Ka Yiri Hadii Messi Uu Yahay Xidiga Ugu Fiican Taariikhda Kubada Cagta